FBSအဖွဲ့သည် ကျွန်တော်တို့၏ ၉သန်းမြောက်ရောင်းဝယ်သူကို တွေ့ဆုံရန်ဝမ်းသာလျှက်ရှိပါတယ် - Rio de Janeiro၊ ဘရာဇီးမှ မစ္စတာ Jean Sales de Souza! သူသည် အင်တာနက်ပေါ်တွင်ရှာဖွေနေခဲ့ပြီး၊ FBS ဝဘ်ဆိုဒ်ကိုရှာတွေခဲ့ကာ၊ မှတ်ပုံတင်ရန်တကယ့်အချိန်ကိုက်ကို ရွေးချယ်မိမှန်း သူ့ကိုယ်သူမသိခဲ့ပါဘူး။
မစ္စတာ de Souzaသည် Forex အတွေ့အကြုံအချို့ရှိခဲ့ပြီး၊ အရောင်းအဝယ်အတွက် အသစ်အဆန်းဖြစ်နေသေးပေမယ့် - FBSမှ သူ့အရောင်းအဝယ် အလုပ်အကိုင်မှာ အများအပြားကူညီလိမ့်မည်ဟု သေချာခဲ့ပါတယ်။ FBSဟာ - သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီး၊ ရလဒ်ရနိုင်တဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီး၊ ရှုထောင့်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကြားရတာ အလွန်ဝမ်းသာပါတယ်!
ကံထူးရှင်ရွေးချယ်မှုကို သင်ကျေနပ်ပါလိမ့်မည်: သူ၏ကံကောင်းတဲ့ဆုအနေနဲ့၊ မစ္စတာ de Souzaသည် Yamaha CROSSER 150 S ဆိုင်ကယ်ကို တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်! သူသည် သူ့အလုပ်အတွက် ဒါကိုလိုအပ်သည်ဟု ပြောခဲ့ပြီး - ဒါဟာ တကယ့်ရွေးချယ်မှုကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
မစ္စတာ de Souza ကို တစ်ကြိမ်ထပ်ဂုဏ်ပြုပြီး၊ Forex အရောင်းအဝယ်၏ ထိပ်တန်းအရောက်သွားမည့် လမ်းမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေဟု ဆုတောင်းပေးပါတယ်! ဒီလမ်းမှာ ကျွန်တော်တို့ကျိမ်းသေကူညီပေးပါမည်။ FBSဟာ အမြဲသင်နဲ့အတူရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကို ဆန်းစစ်ပါ!